Ulawulo Lomgangatho-Newway Valve Co., Ltd.
Inkqubo yoLawulo loMgangatho we-NSW
Iivalvu eziveliswe yiNkampani yeNewsway Valve zilandela ngokungqongqo inkqubo yolawulo lwekhwalithi ye-ISO9001 ukulawula umgangatho weevalvu kuyo yonke inkqubo yokuqinisekisa ukuba iimveliso zifanelekile kwi-100%. Siya kuhlala sibaphicotha ababoneleli bethu ukuqinisekisa ukuba umgangatho wemathiriyeli yokuqala ufanelekile.
Imveliso yethu nganye iya kuba nophawu lwayo lokulandeleka ukuqinisekisa ukulandeleka kwemveliso.
Yenza uMzobo ngokweemfuno zabathengi, kunye nokuphonononga imizobo yokucubungula.
Inxalenye yolawulo lomgangatho:
1. Ukuhlolwa okubonwayo kokusaswa: Emva kokufika kwee-castings kumzi-mveliso, jonga ngokubonakalayo ii-castings ngokwemigangatho ye-MSS-SP-55 kwaye wenze iirekhodi zokuqinisekisa ukuba ii-castings azikho iingxaki zomgangatho ngaphambi kokuba zifakwe kwindawo yokugcina. Kwi-valve castings, siya kuqhuba ukukhangela unyango lobushushu kunye nokujonga unyango lwesisombululo ukuze siqinisekise ukusebenza kwemveliso yemveliso.
I-2.I-Valve Uvavanyo lwe-Wall: I-Castings ingeniswe kwi-factory, i-QC iya kuvavanya ubukhulu bodonga lomzimba we-valve, kwaye inokufakwa kwindawo yokugcina emva kokuba ufanelekile.
3. Uhlalutyo lwezinto ezibonakalayo: izinto ezingenayo zivavanyelwa izinto zekhemikhali kunye neempawu ezibonakalayo, kunye neerekhodi zenziwe, kwaye ke zingafakwa kwisitoreji emva kokuba zifanelekile.
4. Uvavanyo lwe-NDT (PT, RT, UT, MT, ozikhethela ngokweemfuno zabathengi)
1. Ukuhlolwa kobungakanani bomatshini: I-QC ihlola kwaye irekhoda ubungakanani obugqityiweyo ngokwemizobo yemveliso, kwaye inokuqhubeka nesinyathelo esilandelayo emva kokuqinisekisa ukuba ifanelekile.
2. Ukuhlolwa kokusebenza kwemveliso: Emva kokuba imveliso ihlanganiswe, i-QC iya kuvavanya kwaye irekhode ukusebenza kwemveliso, kwaye emva koko iqhubele phambili kwisinyathelo esilandelayo emva kokuqinisekisa ukuba ifanelekile.
3. Ukuhlolwa kwesayizi ye-valve: I-QC iya kuhlola ubungakanani bevalve ngokwemizobo yekhontrakthi, kwaye uqhubeke nesinyathelo esilandelayo emva kokuphumelela uvavanyo.
4. Uvavanyo lokutywinwa kokusebenza kweValve: I-QC iqhuba uvavanyo lwe-hydraulic kunye novavanyo loxinzelelo lomoya kumandla evalve, isitywina sesihlalo, kunye nesitywina esingaphezulu ngokwemigangatho ye-API598.
Ukuhlolwa kwepeyinti: Emva kokuba i-QC iqinisekisa ukuba lonke ulwazi lufanelekile, ipeyinti inokwenziwa, kwaye ipeyinti egqityiweyo ingahlolwa.
Ukuhlolwa kokupakishwa: Qinisekisa ukuba imveliso ibekwe ngokuqinileyo kwibhokisi yeplanga yokuthumela kumazwe angaphandle (ibhokisi yeplanga yeplywood, ibhokisi yeplanga efunxiweyo), kwaye uthathe amanyathelo okuthintela ukufuma kunye nokusasazeka.
Umgangatho kunye nabathengi sisiseko sokusinda kwenkampani. INkampani yeNewsway Valve iya kuqhubeka nokuhlaziya kunye nokuphucula umgangatho weemveliso zethu kwaye ihambisane nehlabathi.